Tiako ny olona amin'ny doka ... | Martech Zone
Tiako ny olona amin'ny doka…
Alatsinainy, 11 Jona, 2007 Alatsinainy, 11 Jona, 2007 Douglas Karr
Ary tena mamorona izany!
Biby goavam-be efatra
Fandram-bolo sy fiainana manokana, fidirana an-tsehatra sa fanandramana ataon'ny mpampiasa?
Jun 12, 2007 ao amin'ny 3: 54 PM
Tiako ity doka ity! Tsy maintsy nijery azy foana aho mba hahalalako ny choreography an'io. BTW miarahaba ny laharanao – saika manapaka ny sakana!
Jun 12, 2007 ao amin'ny 4: 24 PM
Misaotra Christine! Tiako ihany koa, tena faly! Misaotra tamin'ny laharana… Nitsingevana tokony ho 2,000 teo ho eo aho - manaitra ahy izany. 🙂
Jun 12, 2007 ao amin'ny 3: 59 PM
Eny eny – jereo philinthecircle.com. Manao sanganasa kanto ifanakalozana izy mahazo fakantsary avy amin'ireo olona mitsidika ny tranokalany. Tsara be izy.
Jun 12, 2007 ao amin'ny 4: 25 PM
Misaotra ny fizarana Phil ao amin'ny boribory, bandy mahatalanjona re! Ny maso marani-tsaina toy izany - tsy mampino izay vitany tsotra fotsiny mifototra amin'ny fifanoherana. Wow.
Jun 12, 2007 ao amin'ny 8: 55 PM
Ara-barotra tsara tarehy izany! Saingy heveriko fa ny lantom-peony no mahomby aminy. (Raha mba azoko natao ny nilaza i Christiane Amanpour ny anarako indray mandeha…)
15 Jun 2007 amin'ny 11:35 AM
Tadidinao ny faran'ny sarimihetsika Donnie Darko?
15 Jun 2007 amin'ny 11:52 AM
Milay loatra, Matt! Tsy nahita an'i Donnie Darko mihitsy aho!